अन्तर बैंकिङ कारोबार रोक्काले एनआईसी एशियालाई के फरक पर्छ? - कारोबार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
अन्तर बैंकिङ कारोबार रोक्काले एनआईसी एशियालाई के फरक पर्छ?
दीपक भट्ट काठमाडौं फागुन २७
एनआईसी एशिया बैंक र नेपाल बैंकर्स संघबीचको विवादले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा केही प्रश्न उब्जाइदिएको छ।
नेपालमा हाल २८ वाणिज्य बैंकहरु संचालनमा छन्। बैकर्स एशोसिएशनमा सबै बैंक छन्। तर ब्याजदर वृद्धि गर्ने निर्णयपछि बैंकर्स संघले एनआईसी एशियासँग कारोबार नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
सहमति विपरित गएको भन्दै संघ २७ वटा बैंकका सिइओको आइतबार विहान बसेको बैठकले एनआईसी एशियासँग अन्तर बैंकिङ कारोबार नगर्ने प्रस्ताव पारित गरेका हुन्।
यो निर्णयबाट सर्वसाधारणलाई के फरक पर्छ ? स्वयं एनआईसी एशियालाई के फरक पर्छ ?
अन्तर बैंकिंग काराेबार भनेकाे के हाे?
अन्तर बैक कारोवार भनेको एउटा बैंकले अर्को बैंकसँग गर्ने कारोवार हो। कहिलेकाही कुनै बैंकमा तरल रकम अभाव हुँदा त्यो बैंकले सापटीको रुपमा दोस्रो बैंकसँग रकम लिन्छ। त्यो नै अन्तर बैक कारोवार हो। यो सापटी विशेष गरी लगानीयोग्य पैसा अभाव भएको समयमा बैंकहरूले लिन्छन्। यस्तो कारोवारमा न्युनतम शुन्य दशमलव ५० देखि एक प्रतिशत व्याज तोकिएको हुन्छ। यस्तो कारोवारको अवधि अल्पकालीन हुन्छ। अन्तर बैंकिङ कारोबार दुई दिन, पाँच दिन, एक हप्ता, दुई हप्ता बढीमा एक महिनासम्म हुन्छ।
एनआईसी एशियासँग तरल रकम पर्याप्त भएको अवस्थामा उसले अन्तर बैंकिङ कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था नआउन पनि सक्छ। एनआइसीले व्याजदर बढाएको हुनाले उसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त जम्मा हुने सम्भावना बढी छ। बैकर्स एशोसिएशनले एक्ल्याए पनि उसले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने रिपोमार्फत् कारोबार गर्न राेकटाेक हुने छैन। यसर्थमा अन्तर बैंकिंग काराेबार रक्काबाट एनअाइसी एशियालाइ ठूलाे फरक पर्ने देखिँदैन।
निक्षेपकर्तालाई के फरक पर्छ ?
एनआईसी एशियाका निक्षेपकर्ताले बैंकको पछिल्लो निर्णयअनुसार बचत खातामा १० प्रतिशत र मुद्दतीमा १२ प्रतिशत ब्याजदर पाउनेछन्। यो ब्याजदर अहिले बजारमा देखिएका बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी हो। बजारमा एनआइसीको एटिएम कार्ड अरु बैंकबाट चल्दैन भन्ने हल्ला छ। त्यसमा सत्यता छैन। यो हदसम्मको कार्टेलिङ गरी बैंकहरूले सर्वसाधारणलाई दुःख दिए केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्न सक्छ। किनभने त्याे अवस्था भनेकाे एउटा बैंक मात्र नभइ लाखाैं निक्षेपकर्ताकाे सराेकारकाे विषय बन्न पुग्छ। अहिले नै यो अवस्था आइसकेको छैन।
सम्बन्धित समाचार : बैंकर्स संघ निर्णयकाे कानुनी धरातल छैन: एनआईसी एशिया
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा कुनै पनि बैंकले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीतिभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नपाउने बताउँछन्। कुनै अमुक बैंकसँग अन्तर बैंकिङ कारोवार गर्दिन भन्ने अधिकार बैंकलाइ नभएकाे उनकाे भनाइ छ। ‘बैंकहरुले नियमनतः सिन्डकेट लाद्ना पाउँदैनन्। प्रतिस्पर्धाको हिसावमा काम गर्न सबैले पाउँछन्’, नेपालखबरसँग उनले भने। यो समस्या केही दिनभित्र जसरी पनि समाधान हुनुपर्छ। अन्यथा राष्ट्र बैंकले आफ्नो कदम अघि बढाउन सक्छ’, उनले भने।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंङ्गाना भने एनआइसी बैंक समेत बसेर गरेकोसहमति तोडिएकोले संघ यस्तो कदम उठाउन बाध्य भएको बताउँछन्। ‘लगानी योग्य पैसाको अहिले सबैलाई अभाव छ। नयाँ स्रोतको पैसा बैंकहरुमा आउन सकको छैन’, अध्यक्ष ढुंगानाले नेपालखबरसँग भने, ‘कुनै पनि बैंकलाई साह्रोगाह्रो नपरोस् भनेरसहमति गरेको र त्यसमा एनआईसीले बाहिर जान हुँदैनथ्यो।’
राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न सक्छ
राष्ट्रिय लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष डा. मनोहर कृष्ण श्रेष्ठ भने राष्ट्र बैंकको कमजोरीले यो समस्या आएको बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंक नियमनकारी निकाय हो। बैंकहरुको समस्या समाधान गर्ने निकाय पनि राष्ट्र बैंक नै हो’, नेपालखबरसँग उनले भने, ‘अहिले सबै बैंकहरुमा लगानीयोग्य पैसाको अभाव छ। त्यसको लागि राष्ट्रले कुनै पनि कदम चालेको देखिदैन।’
एनआईसी एसिया बैंकका कामु सिइयो रोशन कुमार न्यौपाने भने आफ्नो कदम कानुनी धरातमा सही भएको बताउँछन्। एनआईसी एशियाले नियामक निकायले तोकेभन्दा बाहिर गएर काम नगरेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले खुला बजार अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तआनुसार विद्यमान कानुनको अधिनमा रही निर्णय गरेका हौं’, न्यौपानेले नेपालखरबसँग भने, ‘ब्याजदर योजना फिर्ता हुँदैन।’
सम्बन्धित समाचार : एनआइसी एसियासँग अन्तरबैंकिङ कारोबार नगर्ने प्रस्ताव पारित
रणनीतिक रुपमा भने एनआईसी एशियाले समाधानको प्रयास भने सुरु गरिसकेको देखिन्छ। बैंकले आइतबार बैंकर्स संघलाई पत्र लेख्दै आधिकारिक निर्णयको लागि केही दिन पर्खन आग्रह गरेको छ। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अनुपस्थित रहेको भन्दै बैंकले संघबाट भए गरेका निर्णयहरु सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ। ब्याज दर घटाउने नघटाउने भन्ने विषय पत्रमा उल्लेख नभएको संघ स्रोतले बतायो।
शुक्रबारदेखि बचत र मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर बढाएपछि संघ र बैंकबीच विवाद चर्केको हो। एनआइसीले बचत खातामा १० प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेको थियो। एनआईसीको यो अफर बैंकर्स संघले कार्टेलिङ गर्दै तय गरेको मुद्धतिमा १० प्रतिशत र बचतमा ८ प्रतिशत व्याजभन्दा बढी हाे।
प्रकाशित २७ फागुन २०७४, आइतबार | 2018-03-11 19:54:43